Ogaden News Agency (ONA) – Horjoogihii Hore ee Gobolka Gambella oo Wayaanaha Dhaliilay.
Horjoogihii Hore ee Gobolka Gambella oo Wayaanaha Dhaliilay.
Posted by Dulmane	/ March 30, 2018
Madaxwayne kusheegii hore ee Gobolka Gambella oo warfidiyeenka lahadlay ayaa sheegay in Gobolka Gambella lala maagan yahay xasuuq lamid ah kii sanadkii 2004 loo gaystay dadka shacabka ah ee qoomiyada Gambella.
Okelo Akayi oo ahaa madaxwaynihii hore ee Gobolka Gambella ayaa sheegay in ciidamada wayaanuhu ay sanadkii 2004kii dileen in kabadan 2500 oo qof oo shacab ah oo u dhashay qoomiyada lagumaysto ee Gambella.
Okelo Akayi oo hadalkiisa siiwata ayaa sheegay in hal maalin oo qudha Gobolka Gambeela lagu dilay 424 qof oo rag ah iyo 164 haween ah oo dhamaantood shacab ah, kuwaas oo sida uu Okelo sheegay aan wax dambi ah qabin.
Ninkan horay usoo maray horjoogaha Gobolka Gambella ayaa dhawaan kasoo baxay xabsiga Makalawi oo mudo uu ku xidhnaa, wuxuuna sheegay in dadka qoomiyada Gambella si gaar ah loobahdilo loona xidho bilaa maxkamad.
Qoomiyada Gambella ayaa kamid ah dadka sida wayn uga soo horjeeda xukunka aan xalaasha ahayn ee qoomiyada Tigreega, waxaana jira siyaasiyiin badan oo ree Gambella ah oo kabiyo diidan sida ay wax usocdaan.
Waxaa siwayn isu sootaraya dadka magaca leh ee afkaartooda wayaanaha ku aadan dhiibanaya iyagoo kusugan wadanka gudihiisa, waxayna arintu umuuqataa ilko doofaar lasahansay.